Raja Festival Odisha na Sandpebblestours - Kpọọ + 91-993-702-7574
Na-eme atụmatụ njem gị na Odisha? Mgbe ahụ, Welcome na Raja Festival Odisha, oge kachasị mma iji hụ na ala ahụ na agba ya.
"Raja" - Ọ bụ otu ihe ahụ ọ na - ada; Enwela nsogbu gị n'obi !!! Oge ememme ahụ na-enye ezigbo ngba egwu nke egwú, abụ, ụdị nri, & ọdịnala, nke na-eme ka ihe dị mma mee. N'ezie, ọ bụ ahụmahụ ezumike e mere ka ọ bụrụ ọkwa ọzọ.
Icing on cake, Pebbles Peeji Na-eme njem N Njem na-enye nchịkọta na-atọ ụtọ ka ị gbakwunye nri ahụ na ememe nke "Raja". Na, olee ihe nwere ike ịbụ ụzọ dị mma karịa ịga njem na mpaghara dị iche iche nke steeti iji soro ndị ị hụrụ n'anya na-eme ememe, ọ bụghị gị?
Iji mee ka mmụọ ahụ na-eme egwuregwu dị elu, oge a Pebbles Peeji Na-eme njem N Njem enye aka 20% ego na ntinye akwụkwọ, maka obi ụtọ na njem na ihe karịrị 60 na-eme ka ụgbọala ndị dị mma na-eme. Ma ị chọrọ Sedan, SUV, ma ọ bụ ụgbọ ala okomoko dị elu, ị ga - ahụrịrị na ị ga - ahụ ihe ị ga - eme naanị na pịa.
Dee njem gị na Odisha na Akpụkpọ ụkwụ Pebbles Sand & buru akụ na ụba nke ncheta nke ị ga-eji kpọrọ oge. Kpọọ: + 91-993.702.7574.